I-Paris Hilton noRick Salomon
Futhi yiluhlobo luni lomsebenzi lokhu - udumo? Kuphi lokhu okufundiswayo? Yini ehlanganisiwe emisebenzini esemthethweni yodumo? Kuze kube manje, into eyodwa ecacile: lo msebenzi ongavamile ukhulula kokubili ukuthola imali nokuziqhenya. Kufakazelwe eParis Hilton. I-Paris Hilton noRick Salomon yiyona isihloko sesihloko sethu namhlanje.
Lokho ungathathi abadlali be-hockey
Ngezinye izikhathi kubonakala kimi ukuthi indoda okuthiwa i-Paris Hilton ayikho. Ukuthi empeleni uyisimo se-biorobot, esakhiwe ezinqolobaneni ezifihlekile ze-Pentagon, ezithunywe nguhulumeni. Uhlu lwezimfanelo ezidingekayo 'zomkhiqizo' kwakuzofakwa; ubuhle, ingcebo, ukufutheka, ukuthambekela kokushaqeka nokuntuleka kwamakhono. Ngisho nehlathi lezinkolelo, umuntu kufanele abe ngumuntu obala futhi adore umbala omnyama. Ingxenye yabantu bomhlaba wonke umhlaba uyayithanda, uyayizonda, kanti enye ingxenye ayifuni nje ngokuphila kwayo: kusekhona emgodini wethu omncane lapho bengakaqhubeki khona i-intanethi futhi bafaka izitsha ze-satellite ku-baobab ngayinye, empeleni, yiParis futhi kuyadingeka: hhayi ukushiya noma ubani ongenandaba. Ukuphazamisa, ukududuza, ukunikela ngendlela engalungile noma, ngokuphambene, nesifiso esinamandla sokuphila okuhle. U-Ellochka owayengumnumzane u-Ilf noPetrov balwa noVanderbildihoy, indodakazi yenkosikazi yeVanderbild. Futhi abesifazane abancane banamuhla, ngesigama, lapho kukhona khona u-Ellochkin, ukuncintisana noParis Hilton, indlovukazi-amantombazane.
"Uphelele!" - gcina amehlo akho uqobo. "Uyi-dummy!" - abanye bagaya amazinyo. Kodwa bobabili baqhubeka nokushayela igama elifisayo nesibongo kwizinjini zokusesha: ngenani lezicelo, igama likaParis Hilton lihlasela wonke amarekhodi. Izigidi zabasebenzisa i-intanethi zibuza ukuthi intombazane yenza lokho engenzi lutho. Uma i-Paris yayingekho, kwakufanele ifike. UJean Baudrillard, umculi wezeziFulentshi waseFrance kanye ne-theorist of postmodernism, wabhala isihloko ngo-1991 esithi "Kwakungenayo impi eGulf," lapho ephikisa khona ukuthi umhlaba wonke ubona i-Persian Gulf War kuphela ezikrinini zeTV futhi yayingekho indlela yokwazi ukuthi kwakukhona yini Empeleni, le mpikiswano ingaba yiqoqo lezithombe ezinamazwi aqoshiwe abahlaziyi. Ifilimu ethi "Ukuhlehlisa" ("Umsila ugibela inja") yabonisa ngokucacile ukuthi lokhu kungenziwa kanjani. Mhlawumbe i-Paris ephephala i-blonde ihlale ikhanya phezu kwezikrini, emakhasini omagazini nakuwebhu - okungeyona into eqanjiwe, i-simulator eyakhiwe iqembu labakhiqizi abanobuciko nabenzi bezithombe?
Uma ngabe ngingumlobi we- "X-Files", ngokuqinisekile ngizobhala uchungechunge olumayelana nenhloso yomhlaba wonke yokudala intombazane kanye nezimpawu zomnyaka weshumi kumuntu oyedwa. Kodwa-ke, kubonakala sengathi iParis ikhona. Futhi, ngempela, umsebenzi wakhe oyinhloko uyidumo. Konke okunye - ukuzama ukube yisibonelo, umculi, umdlali wezenzo, ukwenza umsizi - akuyona into ngaphandle kwezingxenyekazi. Ukusebenza, ngendlela, kakhulu futhi ekhokhwa kakhulu: ngenxa yokubonakala kwakhe ephathini, iParis ibamba amaRandi angamakhulu ayizinkulungwane ezingamakhulu amahlanu, Akuyona into embi kakhulu eyona eyayiyilungu kanye nokuntuleka kwamanje kwe-dowry - umhlaba wonke uyazi ukuthi inzalamizi yomndeni ohloniphekile uBarron Hilton wasusa umzukulu wefa elibi. Umshini wokugcina owagcwalisa indebe yokubekezela kaBarron, indodana yomsunguli wombuso wehhotela kaConrad Hilton, wawuneminyaka engu-23 eboshiwe i-blonde yethu, owaboshwa ngokushayela edakiwe.
IParis isebenza ezintweni ezifanayo abahlonishwayo, futhi kamuva namakilasi asezikhukhula, abafeze leli khono libe liphelele. Abesifazane abancane, abakhathazekile kuphela ngamabhola kanye nenhlebo yezwe, kuze kube yilolu suku kwakunezinhlamvu eziyishumi nambili. Isiphetho sabo sasingenakuvinjelwa. Lezi zintombazane zaba yisisulu sezifiso zaboyise, abashade nabo kuphela ngezinjongo zenzalo: abasabazuzi lutho kubo, obaba abathandekayo bathi, kodwa ngesikhathi seminyaka esinqobayo, imishado elula yayifika ngemuva - ngisho no-Elizabeth II ushada ngothando olukhulu. Ngakho-ke abesifazane besifazane abancane, bebona ukuthi abanenzuzo ebhizinisini lomndeni, baqala ukuzibheka - nokuthola kwezobuciko, ezomusa, babonise ibhizinisi. Manje kuyimfashini emhlabeni ukuthola imfundo enhle nokwenza okuthandayo. Isibonelo, u-Ksenia Sobchak, owaqale wabhekwa njengesixuku seParis Hilton, wavikela isayensi yakhe yezombusazwe futhi akazange abe ngumethuli weTV kuphela, kodwa nomculi odumile. Futhi iParis Hilton kuphela ekhuluma ngemfashini: akazami ngisho nokuzenza sengathi wenza okuthile ngokungathí sina. Amafilimu akhe ahluleka ebhokisini lebhokisi futhi athola amabhasikidi agcwele ama-"Raspberries e-Golden", ama-albhamu akhe awadayiswa, nemimoya yakhe, nayo, ayizange ihlasele. Futhi iParis iyaqhubeka ijabule: kubonakala sengathi lena yodwa umsebenzi ayezinikezela kuyo yonke into engathí sina. Ubona ngokucophelela ukuhlanzeka kohlobo olukhethiwe nesitayela, noma yikuphi okudingekayo.
Umkhuba wokuthatha konke okuvela ekuphileni nokunye kusukela ebuntwaneni bakhe: Paris yakhula emndenini lapho engavunyelwe lutho. Indodakazi kaRichard Hilton, oyindlalifa kumndeni wakwaHilton, nomdlali wezeThelevishini u-Katie Avanzino bashintshile izikole eziningana - kwakukhona izindlu eziningi zalowo mbhangqwana ocebile - kanti omunye wabo, eConnecticut, wayeyilungu leqembu le-hockey labesifazane. Cabanga ngeParis Hilton inifomu yeHockey futhi ngenduku? Futhi okwamanje kukhona ubufakazi: iqembu elidutshulwa iqembu, lapho uParis engaphezu kwakho konke - wayesevele enezilinganiso ze-mannequin.
Kodwa ngokujulile uthatha isithakazelo esikhulu emidlalweni - noma kunjalo, ngakho-ke, futhi, no-Paris akazange aphume. Uxoshiwe esikoleni ngenxa yokwephulwa kwemithetho: wathatha imfashini yokuphuma esikoleni esikoleni lapho efuna, futhi e-limousine yakhe. Kodwa-ke, izivivinyo zesitifiketi semfundo yesibili eParis ziqhubeka zidlula - kuleziyunivesithi zaphela, Kukhona impilo emnandi futhi ejabulisayo endala.
Futhi indunazana ihamba!
UParis Hilton kusukela udumo lwabuntwana walala, wavuka. Umama wahudula nami indodakazi yami kuyo yonke imicimbi yomphakathi, lapho ungafika khona nezingane, futhi intombazane enhle yayinendawo yonke indawo. Ngesikhathi esemncane, uParis waba yisibonelo futhi wadlala indima encane kule cinema, futhi lapho eneminyaka engu-19 wayisayina isivumelwano sakhe sokuqala ne-ejensi yokufanisa. Ephothifoliyo yakhe, umkhankaso wokukhangisa u-GUESS no-Christian Dior. Imodeli evela eParis yaphuma kabi - ngenxa yokubukeka kokuwina. Kubonakala sengathi wenza imali enhle; "Ngayeka ukuthatha imali kubazali bami lapho ngineminyaka engu-18. Kusukela ngaleso sikhathi, ngithole ukuphila kwami ​​ngedwa.Kuhle kakhulu ukubona ukuthi awuxhomekile kumuntu noma kubazali bakho nganoma yini." Kodwa ukukhangisa i-vodka ne-perfume, kanye nokuhamba eceleni kwe-catwalk, ngezikhathi ezithile kubonakala esikrinini ngezindima ezincane kuma-comedies angenangqondo ("Isibonelo esilisa", "Cat in hat"), ngokucacile kwakunganele ukuba udume ngempela. Le nkosikazi yaqaphela ngokushesha ukuthi umsebenzi omuhle awuselona iqiniso.
Ngo-2003 kwabekwa uphawu lweParis ngemicimbi emibili, eyodwa enkulu kunaleyo. Okokuqala, ubonakala eqinisweni uchungechunge lwe-TV elithi "Life Simple" - izindaba mayelana namantombazane amabili egolide "afika emhlane waseMelika futhi ezama ukuphila" efanayo "ukuphila okulula": ukukhipha izinkomo, ukufaka umquba, ukusebenza ensimini. Yiqiniso, ayisebenzi. Kodwa lo mdlalo wawuthandwa kakhulu ngokuthandwa kwendabuko hhayi nje ngesifiso sezilaleli eziningi ukuze ubone ukuthi amantombazane asezindaweni zasemadolobheni angena emadolobheni angcolile angabhekana nezinkinga zangempela. Iqiniso liwukuthi ngisho nangaphambi kokukhululwa "Life Simple" emoyeni, iParis yaba inkanyezi yohlu oluhluke ngokuphelele.
U-Paris Hilton noRick Salomon, indodana yengu-vice-mongameli wekhamphani yefilimu i-Warner Bros, bahlangane iminyaka emithathu: okwanele ukuba athathe cishe ihora eliyisikhombisa lezingane ezingcolile bese efaka irekhodi kwi-Intanethi. U-Hilton womndeni masinyane wamemezela obala ukuthi uRick waxhaphaza intombazane empofu. Yena, angabi yisiwula, wamangalela umndeni ohloniphekile ngokuthi "uhlambalaza idumela labo." Phakathi naleso sikhathi, ifilimu isivele ibonakale ekuqashisweni kwevidiyo, ngaphansi kwesihloko esiyinkimbinkimbi esithi One Night In Paris ("Ngobusuku obunye eParis", uma ihunyushwa ngegama elithi "Ngobusuku obunye eParis", uma ukhumbule ukuthi le nkosikazi ibizwa ngokuthi i-capital capital yaseFrance). Kusukela indaba ende futhi eyinkimbinkimbi yezilingo, lapho kwakungacacile ukuthi ngubani ongasolwa, ayipheli lutho, kubonakala sengathi umqondo wokuqala ifilimu ye-porn amateur emoyeni kwakuyiParis ngokwayo, noma kwakuyisinqumo esihlangene noRick, ukuqinisekiswa okungaqondile kwalokhu ingaba yiqiniso lokuthi iParis libe nelungelo lokuthola isithakazelo esihle ekuthengiseni irekhodi.
Intshisekelo ayitholanga kuphela izinto ezibonakalayo - manje, lapho kugxila isixuku esihahayo emfihliyweni engcolile, sahlala kuphela ukusekela ngezinhlamba nezihlazo ezivamile. Ngakho-ke, abantu abasha (amamodeli, abaculi, abadlali, abadlali, abafana "abafana begolide" nje) bashintsha ngesivinini sezinkundleni ngisho namagundane, futhi ama-linens, futhi akukho ukuphuma ku-nightclub akwenzi ngaphandle kokudla okunamafutha emshinini ophuzi. I-Paris idlala ematafuleni, inikeza wonke umuntu ithuba lokuqinisekisa ukuthi ukugqoka izingubo zangaphansi akuyona ingenakwenzeka, uthi uhlobene noLeonardo DiCaprio (u-Leo wesaba ukwesaba), uletha isibambiswane esingapheli, kanti u-Britney Spears osevele engalingani, uyayilungisa "iBentley" ngombala obomvana, uveza indlela yokuthola izinto ezintsha - izinja ze-chihuahua. Bathi ngaye ngokungapheli. Kwafika lapho umholi wezinye iziteshi zezindaba uMika Brzezinskaya (indodakazi kaZbigniew Brzezinski, owayengumeluleki wezokuphepha kazwelonke kuMongameli uJimmy Carter) ngokusobala edubula izindaba zikaParis Hilton emagqumeni emoyeni; wayethukuthele ukuthi i-prank elandelayo yenkosikazi kufanele ibe ngumyalezo wokuqala wokukhululwa - ingabe ibaluleke kakhulu kunempi e-Iraq?
Lezi zindaba , ezicasuliwe ngummemezeli, kwakuwukuthi lo msindo ongenamahloni wawukhishwe ngaphambi kwesikhathi ejele. Umlando wobudlelwane phakathi kweParis nomthetho yi-saga ehlukile. Ekuqaleni wagwetshwa izinyanga ezingu-36 ukuhlolwa kwesidingo - ukushayela utshwala - futhi wakhansela amalungelo, kodwa u-heiress wamshaya isinqumo senkantolo futhi waphinde wahlala ngemuva kwesondo - ngalesi sikhathi wayevalelwe ukushayela nokushayela ebusuku ebusuku. Ijaji lashaqeka: "Usho kanjani ukuthi awukwazi ukuthi ilayisensi yakho yokushayela ikhanseliwe? Usayine idokhumenti ethi uyatshelwa ngakho!" I-Paris, i-naively ibetha ama-eyelashes akhe, yaphendula: "Yebo, ngisayine lapho ngibonisiwe khona, kodwa engingaqondi incazelo, ngingumuntu omatasa kakhulu." Uma bekuyihlaya, khona-ke libiza intombazane kakhulu. Isigwebo sifunde: izinsuku ezingu-45 etilongweni. I-Paris igxile engxenyeni ethi: "Inhlabathi ephazamisayo" yayigcwele ukucindezeleka. Inkosikazi ngendwangu, unganiki noma ungathathi. Ngaphezu kwalokho, iziphathimandla zaseLos Angeles zalinganisa ukuthi iziboshwa ezidumile zibabiza kakhulu: "Amadola angu-1109 angu-78 ngosuku, okuphindwe izikhathi ezingu-10 ngaphezu kokuqukethwe kwanoma yimuphi omunye umonile." Lokhu, ngendlela, kubiza kakhulu kunobusuku ekamelweni likaMengameli lenye yamahhotela eHilton.
Abafana babingelela izilwane zabo ezikhululekile ngezimbali futhi cishe bephethe ikhabethe elibomvu, baphendule eParis ngokushesha bamemezela ukuthi wayezimisele ukusiza abantu nezinhlelo zokuya eRwanda ngenhloso yokusiza. Kodwa-ke, maduzane kwenzeka ukuthi uhambo lwahlehliselwa isikhathi esingenasiphelo: "Ngesaba," esho njengokulula, "Ngafunda ukuthi ukuhamba okunjalo kuyingozi kakhulu." Akuzange kuphume eParis Angelina Jolie. Ngokumelene nesimo sempilo enesivunguvungu, akumangazi ukuthi iParis ayinamathinti kulokho abiza ngokuthi "umsebenzi wakhe". Amafilimu amaningana ahlulekile, okungenani ngaphansi kwe-albhamu ehlulekile, umugqa wesikhwama somklami, brand brand, inethiwekhi yama-nightclub. Kubonakala sengathi iParis isebenza kukho konke, kodwa empeleni - akukho lutho. Konke lo msebenzi ovunguzayo kuyadingeka kuye kuphela njengesizathu sokuhamba emhlabeni wonke futhi wenze amaqembu. Ukuphumelela kwakhe okukhulu emkhakheni webhizinisi lokubonisa kuyi-MTV Award for Best Scream for indima yakhe efilimu ye-horror I-House of Wax. Okuyisimangaliso kakhulu, ngendlela, ifilimu: kulowo umbulali uphendukela abantu abaphilayo emasimweni e-wax. Awunayo yini uParis ngokwayo, isethi-mshini wezintandokazi zomhlaba, ukuthengisa igama lakhe njengomkhiqizo, i-wax dummy nokunye okunye?
Umbukiso kumele uqhubeke
Ngokusobala, ukuze kuqinisekiswe ukuthi akukho muntu ohlukile kuye, i-Paris kanye nesiteshi se-MTV sesungule eMelika naseNgilandi umbukiso omusha we-reality "Umngane Omuhle WeParis Hilton." Ngosizo lwalolu boniso, i-princess, ngokusho kwamazwi akhe, ifuna ukuthola abangane bangempela abangaba nesithakazelo kuye njengomuntu, hhayi njengodumo kanye nesikhwama semali. Wayekhala ngokuphindaphindiwe enkulumweni yakhe ngesizungu: "Kukhona abantu abaningi ababi eLos Angeles, okwakungifanele, kuyilapho yonke impilo yami inikezelwe kuphela emacimbini nasezitolo, kodwa lapho nginesikhathi sokucabanga, ngazizwa ngingenalutho ngaphakathi." Ngisho noma lokhu kungenye ukunyakaza kwe-PR - noma kunjalo kubadlali baseParis, bakulingisa kukho konke, lokhu kufanele kube isizathu esihle sokuzindla.
Ukuze ube umngane ongcono kakhulu waseParis, abahlanganyeli be-show kumele benze imisebenzi eminingi: kusukela ekuguquleni isitayela sezingubo zokuhlanza umquba emgodini (ukufakazela uthando lwabo ngezilwane). Iphrinta ngokwayo, ekhuluma nabakhohlisi, inquma indlela abaqotho ngayo ngayo. Umninimali uthembise "izifundo zokuphila kweParis Hilton", kanti ngenkathi abahlanganyeli beyincintisana, iParis ifunyenwe phakathi kwabathintekayo bezinye izintandokazi kubonisa isoka elisha - igama lakhe nguDoug Reinhardt, ungumdlali we-baseball ongenalwazi owazibonela kuthelevishini.
Izinkanyezi ze-reality show zihlangene kakhulu neParis, ohlala konke ukuphila kwakhe njengokungathi "ngemuva kweglasi": futhi bakhetha ukungenzi lutho ngaphandle kokuphila nokuheha. Enye yezinkanyezi ze-English "Big Brothers", umlandeli wazo zonke izibonakaliso zangempela zomhlaba, uJade Goody waze wagqoka ukufa kwakhe okubuhlungu emdlalweni njengombukiso, Ukuphila kuboniswa, ngaphandle kokuhlazeka nokwesaba - manje sekukhona wonke umuntu, hhayi nje amadodakazi ezinkulungwane, futhi kungabuye kube ukuziqhenya. Sonke siphila ngakolunye uhlangothi lwe-keyhole, futhi kungcono kithi ukuthi singabantu abahlola thina noma labo esibahlola, i-Paris Hilton yi-heroine yesikhathi sethu. Ngaphandle kwethu, ngabe bekungeke kube khona - ngesibindi, evulekile, esheshayo ... futhi ephuzile ngokweqile.
Manje uneminyaka engama-28, lapho sekuyisikhathi sokucabanga ngomndeni nezingane. I-Paris nje yaphika amanga ukuthi uzokwenyuka okungenani amane, - u-Angelina Jolie akazange aphume naye! Emva kwalokho, ngemuva kokumazi umama kaDoug Reinhardt, owabonakala efana neParis ngokwakhe (kubonakala sengathi uFrud wayeqinisile), indodakazi yenkosi ithole ukuthi igcina izingubo zakhe ezinhle kakhulu kumadodakazi esizayo. Amantombazane uhlela ukukhulisa amakhophi abo. Kuyoba mnandi uma umfana ezalwa.
Ngokuqondene ne-movie , kubonakala sengathi, i-Paris ithole yona. Muva nje, ifilimu ethi "i-Ripo! Genetic Opera", ingoma ye-thrash mayelana nekusasa elibi lomuntu: abantu bahlaselwe isifo sengculazi esiyingozi esidinga ukuguquka kwesitho, ngakho ukuhweba kwaba yinto enenzuzo kakhulu. I-aesthetics yefilimu iyi-cyberpunk engcolile nge-gothic ngezingxenye ze-BDSM, enye yezindima eziyinhloko idlalwe yi-opera inkanyezi uSarah Brightman, futhi ngubani ongaphendula lo mbuzo, uParis ahambe kanjani? Kodwa-ke, kule ifilimu, akwanele ukuthi i-brunette, ngakho-ke kubonakala sengathi kufanelekile. Umlingiswa wakhe u-Ember uyindodakazi yenhloko enamandla ye-organ corporation corporation, umlutha wezidakamizwa, oqaphele ukuhlinzeka nge-plastic. Ngesinye sezigcawu zokugcina zefilimu, u-Amber uzama ukucula ku-opera, kodwa ulahlekelwa ubuso. Ngempela, umuntu, ophelelwe yi-"plastic", uvele ewela kuye. Nakuba iParadise ithole enye i-Golden Mulino kule ndima, ukuziqhenya kwayo kule filimu - empeleni, ukuxolisa okubi emphakathini wabathengi, lapho ukuhwebelana komzimba kube yikhizinisi eliyinhloko - akunakusiza kodwa kubonakale. Abathandi befilimu abathandekayo base-Hollywood, yibani nomusa ngokuthi: thatha i-Hilton ngezindima ezinhle, ezizimele zokuhlela uhlelo lwesibili. Okuphambili kakhulu, iParis idlala iParis. Kodwa i-Paris ayikwazi ukudlala noma ubani.
Isahlukaniso se-Xenia Borodina no-Kurban Omarova ingumbhobho?
U-Ivan Okhlobystin udala isiteshi sakhe somsakazo we-TV
U-Alexei Chadov ngemuva kokuphumula no-Ditkovskite wathuthela kumfowabo
Ukungcola endlini kaHulumeni: i-video ekhwabanisayo evela ku-Instagram Andrei Razin 😱😃
UKsenia Borodina wazala intombazane
UPaulina Andreeva utshele mayelana nezigcawu zokulala ebhayisikobho ethi "Locust"
UJulia Kovalchuk ekwindla ngokokuqala ngqa uzoba ngumama
Imikhuba encane nemikhuba emibi
Izinzuzo kanye nokulimala kommbila wezinhlamvu
Kungani owesifazane wesimanje esuka kumuntu
Yini okufanele ugqoke ijaji elibomvu
Indlela yokugcina izinto isikhathi eside?
Uphi i-ultrasound esetshenziswayo?
Aloe isisindo ukulahlekelwa
UDaphne Guinness - isithonjana sesitayela saseBrithani
Ukukhetha izingubo ezifanele zengane yakho
Ama-sweet potato amabhisikidi "Okubabayo"
Sidala ndawonye: indlela yokudweba i-Easter nokuthi yini enye ongayithola ngePhasika
I-pasta namatamatisi nama-capers
Kuphi kungcono ukusebenza - enkampanini enkulu noma enkampanini encane?
Jamu kusuka ku-zucchini nge-lemon
Ukupheka kwezibhendi ezibandayo